Tezitra Noho Ny Sivana Mihatra Amin’ny Fampiharana Finday, Manontany Ny Saodiana: ‘Inona Fotsiny No Antony Hananana Aterineto?’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Septambra 2016 8:38 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Italiano, عربي, Español, English
Efa fampiharana fandefasan-kafatra sy fiantsoana maromaro sahady no notapahan'i Arabia Saodita, anisan'izany ny Whatsapp sy Viber. Sariitatra avy amin'i Hussam Al-Zahrani
Tsy afaka manao antso amin'ny fampiasana fampiharana fandefasan-kafatra an-tsoratra sy feo, LINE intsony ny mponina ao Arabia Saodita. Notapahan'ny manampahefana ny antso amin'ny LINE tamin'ny faran'ny herinandron'ny 3 Septambra, nampidirana azy tao anatin'ny lisitra lavabe misy ny tolotra VoIP sy ny fampiharana fandefasan-kafatra izay notapahana tanteraka na amin'ny ampahany ao Arabia Saodita.
Nahatezitra ireo mpiserasera Saodiana ny fanapahana ny LINE ka niditra tao amin'ny Twitter izy ireo mba hanohitra ny politika fanivanana aterineto ataon'ny fanjakana mpifikitra amin'ny nentin-drazana. Ny tsy fisian'ny antso LINE tampoka, miaraka amin'ireo tolotra notapahana tahaka ny Skype sy Facetime, no nahatonga an'i Abdelaziz Abdallah, mpiserasera manontany hoe:
Ankoatra ny aterineto miadam-paneha, sy ny vidin'ny antso, notapahana avokoa ny fampiharana rehetra. Inona no dikan'ny fananana aterineto?
Notapahana ny fampiharana tao amin'ny firenena, anisan'izany ny Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegrama sy ny Skype araka ny hita ao amin'ny sary eto ambany, izay navoakan'ilay mpiserasera Mohammed Alarfaj tao amin'ny Twitter:
Fampiharana nakatona tao Arabia Saodita. Nakatona manontolo ny Viber sy Facetime, raha nakatona amin'ny ampahany kosa ny Snapchat, Telegram, sy Skype. Ny antso ihany kosa no notapahana tao amin'ny Whatsapp, Line, Google Hangouts sy ny Facebook Messenger. Loharanom-baovao: @iM7M7 tao amin'ny Twitter
Manazava ny sary fa ireo fampiharana sy tolotra ireo dia nakaton'ny Vaomieran'ny Teknolojiam-pifandraisana sy ny Fampahalalam-baovao (CITC), mpandrindra ny orinasam-pifandraisana ao Arabia Saodita, na mpamatsy tolo-pifandraisana miasa ao amin'ny firenena, ary tsy nisy ny fanambarana ofisialy. Tao amin'ny tranonkalany sy ny sehatra haino aman-jery sosialy hafa hatreto ny CITC dia tsy mbola nandefa fanambarana na filazana mikasika ny fanakatonana ny LINE, izay miasa ho sampana goavan'ny teknolojia Koreana Tatsimo Naver.
Amin'ny fampiasana ny tenirohy amin'ny teny Arabo “ampy izay ny fanakatonana ry vaomieram-pifandraisana” (#هيئة_الاتصالات_كفاية_حجب) “fanapahana ny antso line” (#حجب_مكالمات_اللاين), ary ny “mitaky ny fanatsarana ny [tolotra] aterineto ao Arabia [Saodita] izahay ” ( #نطالب_بتحسين_النت_في_السعوديه), namely tahamaina ny mpandrindra ny orinasam-pifandraisandavitra, ny governemanta, ary ny mpandraharaha amin'ny tsy fanomezan-danja ny zon'ny mpanjifa sy ny tombontsoan'ny mpanjifa ny Saodiana.
Ny zavatra ataon'ny orinasam-pifandraisana dia ny mampijaly ny olona, satria izy ireo no hany orinasa ao Arabia Saodita ary mila azy ireo ny vahoaka
Paikady tsotra mba hampitombo ny tombombarotr'ireo orinasan'ny fifandraisana ao amin'ny fanjakana ny fanapahana ny antso Line. Afaka andro vitsivitsy, hisy ny vahaolana miaraka amin'ny vokatra mifaninana amin'i Line,
Namantana ny resaka any amin'ny CITC, nisioka ny mpandrindra ny indostrian'ny fifandraisana ao Arabia Saodita, Al-Badr Atibi, hoe:
Ny tombontsoan'ny orinasam-pifandraisan-davitra ihany no raharahianareo, tsy mampanahy anareo ny olom-pirenena. Miresaka amin'ireo havany sy ny zanany any ivelany mampiasa ireo rindrambaiko ireo ny ankamaroan'ny olona.
Naneho ny ahiahiny i Abeer AlMutairi fa mety safidy fandefasan-kafatra iray, dia ny SMS sisa no avela ho an'ny Saodiana:
Noho ny fanapahana, efa nampoiziko fa SMS ihany sisa no ho tavela. Tsy tokony atao ny fanapahana raha tsy misy antony mandresy lahatra. Mandroso izao tontolo izao kanefa isika mihemotra.
Misahana ny fandaminana ny sehatry ny teknolojiam-pifandraisana sy ny fampahalalam-baovao miaraka amin'ny tanjona hanatrarana ny “tontolo tena mandroso amin'ny fanomezana tolotra tsara kalitao ho an'ny mpiserasera sy tontolo manintona ny mpampiasa vola” ny CITC, ary tompon'andraikitra amin'ny fanivanana ireo tranonkala an'arivony, sy mandefa ny fangatahana fanesorana votoaty any amin'ny sehatra media sosialy.
Tsy i Arabia Saodita ihany no firenena ao amin'ny faritra Arabo manakatona ny tolotra VoIP. Ao amin'ny Emirà Arabo Mitambatra, ny fanomezana tolotra tahaka izany dia mijanona ho tombontsoa manokan'ireo mpamatsy tolotra sy mpandraharaha roa ao amin'ny firenena: Etisalat sy Du . An'ny fanjakan'i Emirà Arabo Mitambatra ny maro an'isa amin'ny petrabolan'ireo orinasa roa ireo. Tany am-piandohan'ity taona ity, nandràra ny tolotra VoIP tamin'ny finday sy ny tambajotra wifi i Maraoka, izay noderaina hatrany tamin'ny fampahalalahana ny sehatry ny fifandraisan-davitra tamin'ny filazana fa ny andininy faha-2 amin'ny lalànan'ny fifandraisana (lalàna n ° 24-96) ihany no manome alalana ho an'ireo mpandraharaha manana fahazoan-dalana mba hanome tolotra antso an-telefonina.